လှကျော်ဇော ● ပိုးလမ်းမသစ်စီမံကိန်းကြီးကပေးတဲ့ သင်ခန်းစာများ - အပိုင်း (၃) - MoeMaKa Media
Home / Currents / Hla Kyaw Zaw / International / လှကျော်ဇော ● ပိုးလမ်းမသစ်စီမံကိန်းကြီးကပေးတဲ့ သင်ခန်းစာများ - အပိုင်း (၃)
လှကျော်ဇော ● ပိုးလမ်းမသစ်စီမံကိန်းကြီးကပေးတဲ့ သင်ခန်းစာများ - အပိုင်း (၃)
● ပိုးလမ်းမ အစ
၂၀၁၃ ခုနှစ် သမတရှီကျင့်ပင်က ကာဇက်စတန်နဲ့ အင်ဒိုနီရှားခရီးစဉ်တွေမှာ ပိုးလမ်းမအသစ် (ကုန်းလမ်း ရေလမ်း) ကို ပူးတွဲ တည်ဆောက်ဖို့ စကားစခဲ့ပါတယ်။ ပြီးတာနဲ့ မြန်မြန်ဆန်ဆန်ပဲ လုပ်ငန်းတွေကို ဘက်စုံကစတင်ခဲ့ပါတယ်။
ပိုးလမ်းမရဲ့ သမိုင်းကြောင်းကတော့ ....
လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း (၂၀၀၀) ကျော် တရုတ်ပြည်က ဟန်မင်းဆက် (ဘီစီ၂၀၀) ကာလကစတင်ပြီး တရုတ်ကုန်သည်များ ကုန် သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းဖွင့်ပြီး ကုလားအုတ်များ မြင်းများ လားများနဲ့ တရုတ်ဘုရင်များနန်းစိုက်ရာ ချန်အန်း (ယခု ရှီအန်း)ကနေ အာရှကုန်းမြေမြင့်ကြီးကိုဖြတ် ဥရောပသို့သွားခဲ့တဲ့လမ်းဟာ အဓိက တရုတ်ပြည်ကထုတ်လုပ်တဲ့ ပိုးထည်များကို (အဲဒီခေတ် ရောမအင်ပါယာက အထက်တန်းလွှာတွေအတွက်) သယ်ဆောင်ရောင်းချတာဖြစ်တဲ့အတွက် ပိုးလမ်းမလို့ သမိုင်းမှာ အမည်တွင်ခဲ့တာပါ။ ပိုးထည်တင်မကပါဘူး။ တခြားထွက်ကုန်အမျိုးမျိုး (လဘက်ခြောက်၊ ကြွေထည်ပစ္စည်း များစသဖြင့်) လည်း ပါဝင်ပါတယ်။ ကုန်ပစ္စည်းများ ဖလှယ်ရာ ယဉ်ကျေးမှုများဖလှယ်ရာ လမ်းကြောင်းကြီးအဖြစ် ပုံဖော်ခဲ့ ကြပါတယ်။(ဥရောပသားများ - ဥပမာ အီတလီနိုင်ငံသား မာကိုပိုလိုကလည်း ဒီလမ်းအတိုင်းပဲ အရှေ့တိုင်းတရုတ်ပြည်ကိုလိုက်လာခဲ့ကြပါတယ်။)
ကမ္ဘာအရှေ့နဲ့အနောက် ဆက်သွယ်ရာလမ်းကြောင်းကြီးပေါ့။ ဒါကို ကုန်းတွင်းပိုင်းဆိုင်ရာ ပိုးလမ်းမလို့လည်း ခေါ်နိုင်ပါတယ်။ နောက်တလမ်းကတော ရေကြောင်းလမ်းပါ။
၁၅ ရာစုမင် မင်းဆက်ခေတ်မှာ ကျန်းဟဲဆိုတဲ့ မှူးမတ်တဦးဟာ သစ်သားသဘောၤကြီးတွေတည်ဆောက်ပြီး သဘောၤသား သောင်းချီပါရှိတဲ့ လှေအုပ်စုကြီး (fleet) နဲ့ နန်ကင်းကအနောက်ဘက်ကို ရေလမ်းခရီး အကြိမ်ပေါင်း (၇) ကြိမ် ထွက်ခဲ့ပါတယ်။ (အမေရိကတိုက်ကို ခရစ္စတိုဗာကိုလံဘတ် ရှာတွေ့ချိန်ထက် အနှစ် ၁၀၀ နီးပါး စောပါတယ်။) အဲဒီခရီးများတလျှောက် အရှေ့တောင်အာရှ အင်ဒိုနီရရှား မလေးရှား ဖိလစ်ပိုင် အရှေ့အလယ်ပိုင်းဒေသများ (ဆော်ဒီအာရေဗျ) အပြင် အာဖရိက တိုက် အရှေ့ကမ်းခြေ (ကင်ညာ ဆိုမာလီ) အထိ ခရီးပေါက်ခဲ့ပါတယ်။
ကျန်းဟဲက တရုတ်ပြည်ကအဖိုးတန်ကုန်တွေဖြစ်တဲ့ ပိုးထည် ကြွေထည် ရွှေထည် ငွေထည် ကျောက်စိမ်း စတာတွေသယ် သွားပြီး အပြန်ခရီးမှာတော့ တရုတ်ဘုရင်ကိုဆက်သဖို့ အထူးအဆန်းပစ္စည်းများ (အာဖရိကက သစ်ကုလားအုပ်တောင် သယ်ဘူးသတဲ့)အပြင်အဲဒီနိုင်ငံတွေက သံတမန်များကိုလည်း မိတ်ဖွဲ့ဖို့ခေါ်လာတတ်တယ် လို့သမိုင်းသုတေသီများက ဆိုပါ တယ်။
ဒီလိုနည်းနဲ့ ကျန်းဟဲဟာ ကုန်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းတွေကိုဖွင့်လှစ်ရုံမက ယဉ်ကျေးမှုတွေ သံတမန်ဆက်ဆံရေးတွေ နည်း ပညာဖလှယ်မှုတွေကိုပါ ဖြစ်ပေါ်တိုးတက်စေခဲ့ပါတယ်။ ဒါကို ရေလမ်းကြောင်း ပိုးလမ်းမလို့ ခေါ်တွင်ပါတယ်။
(စကားချပ်။ ။ ဒီကျန်းဟဲရဲ့ခရီးစဉ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး အခုခေတ် တရုတ်သုတေသီများ အလွန်ဂုဏ်ယူပြောဆိုတဲ့ အကြောင်း အရာတခု ရှိပါတယ်။ လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း (၆၀၀) ကျော်က အင်အားအကြီးဆုံးရေတပ်ကြီး လိုဖြစ်ခဲ့တဲ့ တရုတ်လှေတပ်ကြီးဟာ ကုန်ပစ္စည်းများဖလှယ်ဖို့၊ မိတ်ဆွေဖွဲ့ဖို့တို့လောက်ပဲ လုပ်ဆောင်တာတွေ့ရတယ်။ နယ်ချဲ့ဖို့၊ ကိုလိုနီရှာဖို့ မလုပ်ခဲ့ကြဘူး။ ဒါ့ကြောင့် တို့တတွေမှာ အဲသလိုနယ်ချဲ့ဖို့ စိတ်ကူးမျိုးရိုးဗီဇ (Gene) ပါမလာဘူးတဲ့။ အခုတလောလုပ်ဆောင်နေတဲ့ စစ်ရေး အခမ်းအနားတွေမှာလည်း ရှီကျင့်ပင်ပြောပြောနေတဲ့စကားတရပ် ရှိပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ဟာ ကျွန်တော်တို့အဘိုးအဘွား များ ချန်ထားပေးခဲ့တဲ့ ဘယ်မြေတလက်မမှ အဆုံးမခံနိုင်ဘူး။ ထို့အတူ ကျွန်တော်တို့မဆိုင်တဲ့မြေကိုလည်း တလက်မမှ မလိုချင်ဘူးတဲ့။)
ပိုးလမ်းမစီမံကိန်းဆိုတာ ဒီခရီးလမ်းကြောင်းတွေကို ပြန်အသက်သွင်းဖို့ ကြိုးစားမှုပါပဲ။
အဲဒီ ၂၀၁၃ ခုနှစ်ကစလို့ တရုတ်တွေဟာ သူတို့ပြည်တွင်းမှာပဲဖြစ်ဖြစ် ပြည်ပနိုင်ငံများမှာပဲဖြစ်ဖြစ် အခါအခွင့်ကြုံတဲ့နေရာ တိုင်းမှာ ဒီစီမံကိန်းကို မိတ်ဆက်ပါတယ်။ ဒီလိုနဲ့ နိုင်ငံအတော်များများရော၊ နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းများကရော စိတ်ဝင် တစား လှုပ်ရှားလာကြပါတယ်။
တရုတ်တွေက ဒီလို ဆိုပါတယ်။ ဒီပိုးလမ်းမသစ်စီမံကိန်းဟာ တရုတ်ပြည်ကအစပြုပေမယ့် တကမ္ဘာလုံးနဲ့ဆိုင်ပါတယ်။ အတိတ်သမိုင်းမှာ မြစ်ဖျားခံပေမယ့် အနာဂါတ်ကို ရှေ့ရှုပါတယ်။ အာရှ ဥရောပနဲ့ အာဖရိက အပေါ်အရေးထားပေမယ့် ဘယ်သူမဆို အားလုံးကိုဖိတ်ခေါ်ပါတယ်။
ဘယ်နိုင်ငံမဆို ဘယ်ဒေသမဆို မတူညီတဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုအဆင့်များ၊ မတူညီတဲ့ သမိုင်းအစဉ်အလာများ၊ မတူညီတဲ့ ယဉ်ကျေးမှု ဘာသာတရားများ၊ မတူညီတဲ့ဓလေ့ နေထိုင်မှုဘဝများ အားလုံးပါဝင်နိုင်ပါတယ်။
ဒါဟာ ပထဝီနိုင်ငံရေးအတွက်သော်လည်းကောင်း စစ်ရေးမဟာမိတ်ပြုမှုအတွက်သော်လည်းကောင်းမဟုတ်ပဲ ငြိမ်းချမ်းစွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဖို့နဲ့ စီးပွားရေးအရ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ဖို့ စီမံကိန်းတရပ်သာဖြစ်ပါတယ်။
ဒါဟာ ပွင့်လင်းမြင်သာမှုရှိတဲ့ အားလုံးပါဝင်တဲ့ ဘုံဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်ရည်ရွယ်တာဖြစ်ပြီး တရုတ်တွေရဲ့ တပင်တိုင် အကမဟုတ်ပဲ သံစုံတီးဝိုင်ကြီးသာ ဖြစ်ပါတယ်။
နိုင်ငံများအကြားအတွေးအခေါ်အပေါ်အခြေခံခွဲခြားမှုများ မလုပ်ပါဘူး။ ပါဝင်ချင်တဲ့ဆန္ဒရှိတဲ့ ဘယ်နိုင်ငံမဆိုပါဝင်နိုင်ပါတယ်။
ဒီစီမံကိန်းကြီးအတွက် ကိုင်စွဲထားတဲ့ မူတွကတော့ ...
၁။ အကျယ်အပြန့် တိုင်ပင်ဆွေးနွေးခြင်း
အင်အားစုအားလုံး ကိုစုစည်းပြီး သဟဇာတမျှတတဲ့ နိုင်ငံတကာလူ့အဖွဲ့အစည်းတရပ်တည်ဆောက်ရေး။
၃။ အကျိုးကျေးဇူးများကို မျှဝေခြင်း
ပါဝင်ပတ်သက်သူအားလုံး ထင်သာမြင် သာရှိတဲ့အကျိုးအမြတ်များရရှိရေး။
ဒါတွေဟာ အရင်ရှေးခေတ်ပိုးလမ်းမ စိတ်ဓာတ်ဖြစ်တဲ့ ငြိမ်းချမ်းရေးနဲ့ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေး၊ ပွင့်လင်းမြင်သာမှုနဲ့ အားလုံး ပါဝင်မှု၊ အပြန်အလှန်လေ့လာရေးနဲ့ အပြန်အလှန်အကျိုးရှိရေးဆိုတာတွေကို ပြန်ဆန်းသစ်တာဖြစ်ပါတယ်။
ဒီစီမံကိန်းကြီးရဲ့ အဓိကဦးစားပေးမှုကတော့ နိုင်ငံများအကြား အချိတ်အဆက် အဆက်အစပ်များ (Connectivity)အမျိုးမျိုး တည်ဆောက်ခြင်းပါပဲ။
ဒီစီမံကိန်းကြီးအတွက် အလွန်အရေးကြီးတဲ့ အခြေခံလိုအပ်ချက်ဖြစ်ပါတယ်။ ပါဝင်ပတ်သက်တဲ့နိုင်ငံများနဲ့သာမက နိုင်ငံ တကာ အဖွဲ့အစည်းအမျိုးမျိုးရဲ့မူဝါဒများ လုပ်ငန်းစဉ်များနဲ့ အပြန်ပြန်အလှန်လှန် ဆွေးနွေးထိမ်းညှိမှုတွေပြုလုပ်ပြီး နိုင်ငံတကာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုအတွက် ကျယ်ပြန့်တဲ့ ဘုံသဘောတူညီချက်ရအောင်ရှာရေး။
၂။ အခြေခံအဆောက်အအုံအမျိုးမျိုးအကြား ဆက်စပ်ချိတ်ဆက်ခြင်း။
၃။ ကုန်သွယ်ရေးများ လမ်းကြောင်းများအကြား ချိတ်ဆက်ခြင်း။
၄။ ဘဏ္ဍာရေးဆိုင်ရာလမ်းကြောင်းများ အဆင်ပြေချောမွေ့သွားရေး။
၅။ ပြည်သူလူထုအချင်းချင်းအကြား ပိုမိုနီးစပ်စွာ ချိတ်ဆက်နိုင်ရေး။
၆။ စက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းများအကြား ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေး။
ဆိုတဲ့မူများချမှတ်ထားတဲ့အပြင် ဒီရည်မှန်းချက်များအပေါ် ပြန်လှန်သုံးသပ်ညှိနှိုင်းရေးအတွက် (၂) နှစ်တကြိမ် ဖိုရမ်ဆွေး နွေးပွဲကြီးများပြုလုပ် ရန်လည်းသတ်မှတ်ထားပါတယ်။ ဒီအတွက် ၂၀၁၇ မှာတကြိမ် ၂၀၁၉ ဧပြီလ ကုန်မှာတကြိမ် (၂) ကြိမ် တိတိဆွေးနွေးပွဲကြီးများလည်း ကျင်းပပြီးခဲ့ပါပြီ။
အပိုင်း (၄) မှာတော့ နိုင်ငံအသီးသီးတွေရဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ပေါ်လစီများနဲ့ တရုတ်ရဲ့ပိုးလမ်းမစီမံကိန်း ဘယ်လိုဆက်စပ်မိ အောင် လုပ်ဆောင်တယ်ဆိုတာကို တင်ပြပါ့မယ်။
၁၆၊ ၅၊ ၂၀၁၉
China Daily 23-4-2019 pg 9
The Progress ,Contribution and Prospects of BRI.(The leading group of BRI).
လှကျော်ဇော ● ပိုးလမ်းမသစ်စီမံကိန်းကြီးကပေးတဲ့ သင်ခန်းစာများ - အပိုင်း (၃) Reviewed by Aung Htet on 11:22 AM Rating: 5